Yini Oyaziyo Ngezinto Ezilungile Isizini 2? - Ukuzijabulisa
Iphele Kanjani Into Elungile Isizini 1?
Buyekeza Mayelana Nezinto Ezilungile Isizini 2?
I-Right Stuff, uchungechunge olusha lwe-Disney Plus olulingisa indaba ye-Mercury 7 - osomkhathi bokuqala baseMelika - olukhishwe okokuqala muva nje. I-Right Stuff yethulwe ngo-Okthoba 9, futhi kuzoba neziqephu eziningi ngokuzayo. Abantu abaningi sebevele bebuza ukuthi kuzoba nesequel. I-Right Stuff iyidrama yomlando waseMelika esakaza uchungechunge lwethelevishini olwasakazwa kuyo I-Disney+ ngo-Okthoba 9, 2020, futhi ngokwengxenye isekelwe kunoveli kaTom Wolfe yango-1979 yegama elifanayo kanye nokujwayela kwayo ifilimu yango-1983.
Ibheka ukuqala nokuthuthukiswa kohlelo lwasemkhathini lwase-US. Lolu chungechunge lunqanyulwe yi-Disney+ ngo-Ephreli 3, 2021, ngenxa yoshintsho ekugxilweni kwesiteshi se-NatGeo. umnikeli wohlelo Uchungechunge luthengiswa kumanethiwekhi engeziwe ngabakwa-Warner Bros. Television.
Funda kabanzi:- Jabula Ngama-Transformers Rise Of The Beasts
I-NASA yenza umhlangano nabezindaba ukuze imemezele ukuthi uShepard, Grissom, noGlenn bazoba yiqembu lokuqala elizondizelwa emkhathini, nokho bayaphika ukuthi laba abathathu bazokwethulwa nganoma iyiphi indlela. U-Glenn uyabona ukuthi ukugcina umyalo ufihliwe kuvumela i-NASA ukuthi iguqule izingqondo zabo, ngakho-ke uthumela izincwadi ku-NASA mayelana nokungaziphathi kahle kukaShepard, naphezu kokungathokozi kuka-Annie. I-PSAC incoma ukuhlolwa okujulile kosomkhathi izinyanga ezimbili ngaphambi kokwethulwa. Ukuboniswa kukaShepard kuyimpumelelo, naphezu kwenkinga yakhe yezindlebe.
Lapho i-arrhythmia yenhliziyo ka-Slayton itholakala, uyasuswa ku-Seven. Ukwethulwa kukaShepard kuhlehlisiwe ukuze kwenziwe ukuhlolwa kokwethulwa kwezimfene. Ukuhlolwa kuphumelele, kodwa ukubambezeleka kuvumela amaRussia ukuthi athumele u-Yuri Gagarin ku-orbit njengomuntu wokuqala emkhathini.
UMongameli uKennedy uyakweseka ukwethulwa kwesikhala kukaShepard, okuzovulelwa abezindaba kanye nezibukeli, kulandela uhambo lwaseRussia lwasemkhathini kanye neBay of Pigs. Lapho uCooper ebuzwa ngebutho labesifazane basemkhathini engqungqutheleni yezindaba, wenza ihlaya ngakho, uTrudy akuthola kudumaza. Izincwadi zikaGlenn ezimelene naye zitholwe nguShepard.
UGlenn kufanele abhekane nokulindela ukuthi uzoba ngowokuqala ukundiza. Ukunganaki kukaShepard kwembulwa kuLouise. Ukwethulwa kukaShepard kubambezeleke ngezinsuku ezimbili ngenxa yesimo sezulu esibi, kodwa abezindaba bayambona egqoke isudi yakhe yendiza, okubonisa ukuthi uzoba ngumMelika wokuqala emkhathini.
Funda kabanzi:- Ingabe Indoda Evela EToronto Iyeza Maduze?
Ngonyaka odlule, izinto bezisalindele 'Izinto Ezilungile,' kodwa ngo-April 2021, sathola izindaba ezimbi. Uhlelo lukhanselwa ngemuva kwesizini eyodwa kuphela ku-Disney+. I-Warner Brothers ibheka ikhaya elisha lalo mbukiso, kodwa kusukela kulesi sibuyekezo, akekho umsakazi omusha noma inethiwekhi entsha eyembuliwe ukuthi iyithathe.
Ngokomthombo we-Variety, ukukhanselwa kube ngenxa yokuguquguquka kokugxila kwamasu e-NatGeo, hhayi impumelelo yombukiso. Isizini yesibili kulindeleke ukuthi iqale ukukhonjiswa ngo-2021, kuya ngesivinini sokukhiqiza. Ukulandelela kungase kuhlanganise nezinye iziqephu eziyisishiyagalombili, ezizoqala masonto onke kunokuba zikhishwe kanyekanye.
Funda kabanzi:- Izinto Ezithokozisayo NgamaMinions Ongeke Waphuthelwa
I-National Geographic yamemezela ngoJulayi 25, 2017 ukuthi ihlanganyele ne-Appian Way Productions kanye ne-Warner Horizon Television ukuze bakhethe amalungelo e-movie enoveli kaTom Wolfe ka-1979 ethi The Right Stuff. UWill Staples ubehlelelwe ukuthi abhale lolu chungechunge, kanye nomkhiqizo omkhulu kanye noLeonardo DiCaprio noJennifer Davisson.
I-Coin Hunt World Metaverse: Ukuzingela ama-Bitcoins emhlabeni jikelele!
I-Fargo isizini yesi-5: Ikhanseliwe noma Ivuselelwe yi-Netflix?